Firaisana ara-nofo. Fantatsika rehetra izany sy ny ankamaroantsika manana izany. Inona anefa no moa ve isika tena fantatsika momba ny firaisana ara-nofo? Inona no fantatsika momba ny orgasms, filahiana haben'ny, ary sexercise? Efa nanangona ny lisitry ny 7 zava-mahagaga izay hamela ny namana sy tia talanjona.
Zava-misy #1: Rehefa hananganana, ny salam-haben'ny filahiana dia 5 ny 5.7 santimetatra ny lavany
Araka ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'ny Akademia National Paris ny Fianarana, indrindra ry zalahy fepetra 5 ny 5.7 santimetatra ny lavany, ary 3.9 ny 4.1 manodidina rehefa naniraka. Dia mifanohitra amin'ny finoana malaza, Maro ny olona tsy manana 7 mirefy filahiana.
Zava-misy #2: Rehefa naniraka ny fivaviana ny vehivavy raha ny marina mivelatra
Antsalany fivaviana dia matetika 3 ny 4 santimetatra ny lavany. Rehefa naniraka mety tena manitatra ny roa-jato isan-jato, araka ny fikarohana. Ka amin'ity tranga ity, habe raha ny marina tsy mampaninona.
Zava-misy #3: Orgasms vehivavy mety haharitra hatramin'ny 4 fotoana raha mbola olona ny
Ny lahy eo ho eo levitra maharitra momba 6 segondra raha maharitra ny vehivavy momba 20.
Zava-misy #4: Telopolo minitra ny firaisana ara-nofo dia hanampy may 200 kaloria
Araka ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny vehivavy ny Day Magazine, firaisana ara-nofo dia mety ho avo-calorie fandoroana. Ny fanalahidy dia ny manao firaisana ara-nofo intsony mafana sy farany. Misento sy moaning afaka manampy hodorana fanampiny kaloria. Ny fomba iray hafa dia ny mifamadika ny toerana sy ny toerana na dia manitatra. Ohatra, raha toa ka eo an-tampony ianao miezaka ny andilany mampihetsi-po toy ny kibony mpandihy. Ny manam-pahaizana milaza fa ny vehivavy ihany koa izay hahazoana ny levitra nandritra firaisana ara-nofo mba hodorana mirona sakafo be kalôria.
Zava-misy #5: Ny salanisan'ny ejaculation ny hafainganam-pandeha ny lehilahy nandritra ny roa-polo-levitra valo kilaometatra isan'ora
Tonga haingana ny demonia; na izany aza, indray mandeha ny tsirinaina izy ireo hiditra ao amin'ny fivaviana tanteraka miadana. Mitaky order 5 minitra mba hanao ny 6 mirefy nandeha ny mahatratra ny cervix. Mety ihany koa ny mandray tsirinaina niakatra ho any 72 ny ora maro mba hahita atody, araka ny Mark Elliot, talen'ny Institute Psychological sy ara-nofo ho an'ny Fahasalamana.
Zava-misy #6: Manome toerana tsotra mahery vaika indrindra orgasms
Raha mitady ny saina-fitsofana, fandriana-rattling levitra tsora-kazo ny hifantoka amin'ireo fitsipika fototra. Araka ny firaisana ara-nofo mpanabe Dorian Solot, rehefa miezaka vaovao, toerana sarotra kokoa, ny mifantoka amin'ny fiezahana hitady ny tena fifandanjana oharina amin'ny firaisana ara-nofo. Amin'ny fanovana vitsivitsy ny nentim-paharazana toerana firaisana ara-nofo, afaka hahatonga azy ireo bebe kokoa orgasmic.
Zava-misy #7: Yoga mba hampitomboana ny arousal, orgasms, sy ny fahafaham-po ara-nofo
Firaisana ara-nofo be dia iray amin'ireo saina-body farany niainany, ary tahaka izany koa ny yoga. Tsy vitan'ny hoe miady saina ny yoga lehibe sasany eo reliever fa hanatsara fihetsika, manovaova, ra, ary hanokatra ny fonao – rehetra fa mafana be ny fiainana firaisana ara-nofo. Yoga koa dia manampy mba hampianatra mindfulness sy velona ao amin'ny ankehitriny, zavatra roa hafa izay manampy hivadika tsara firaisana ara-nofo firaisana ara-nofo ho lehibe.